AudioMob: Miantso amin'ny varotra amin'ny taona vaovao miaraka amin'ny doka audio | Martech Zone
Ny doka am-peo dia manome fomba mahomby sy kendrena ary azo antoka ho an'ny marika hampiatoana ny tabataba sy hanamafisana ny varotra amin'ny taom-baovao. Ny fiakaran'ny dokam-barotra am-peo dia somary vaovao amin'ny indostria ivelan'ny radio saingy efa mamorona buzz goavana. Ao anatin'ity horakoraka ity, ny doka am-peo amin'ny lalao finday dia manamboatra ny sehatra misy azy ireo; manelingelina ny indostria ary mitombo haingana, ny marika dia mahita kalibon'ny fametrahana doka amin'ny lalao finday. Ary mihodina hatrany amin'ny lalao finday ny olona, ​​mitady fomba vaovao hamenoana ny fahasosorana.
AudioMob no mpisava lalana amin'ity endrika vaovao ity: Google for Startups aorina praiminisitra amin'ny doka am-peo amin'ny lalao finday. Ny endrika doka ataon'izy ireo dia azo antoka sy azo antoka tanteraka, miaraka amin'ny mety hisian'ny marika ho sahy sy hamorona amin'ny fanatontosana mpihaino marobe.
Ny tontolon'ny dokam-barotra dia be atao noho ny tamin'ny taon-dasa, ary maro ny fivarotana ara-batana mihidy noho ny fanidiana ny ady an-tserasera no hifaninanana kokoa noho ny teo aloha. Noho izany, ny marika dia tokony ho marani-tsaina kokoa amin'ny fandaniam-bolan'izy ireo amin'ity taona ity mba hahazoana ambiny sy hahatratrarana ny valiny tadiaviny; Ireo doka am-peo dia manome ny fiara tonga lafatra hanaovana izany.
Mangataka fanandramana doka tsaratsara kokoa ny mpanjifa
Herintaona tsy nisy toy izany ny 2020, ary miaraka amin'ny fotoana laniana ao an-trano, dia nanaloka ny habaky ny haino aman-jery ireo dokambarotra mahazatra. Lockdown dia nitondra monotony ho an'izao tontolo izao, miaraka amin'ny asa any an-trano, misakafo ao an-trano ary milalao avy any an-trano izay heverina ho mahazatra vaovao.
Ny fiantsenana ny Taom-baovao amin'ity taona ity dia tsy hitovy: ny fivoahana amin'ny varavarana sy ny filalaovana amin'ny varotra farany dia virtoaly daholo. Noho ny fivarotana ara-batana maro be mihidy ho an'ny besinimaro, ny varotra dia entina an-tserasera, ary ny mpivarotra dia mety hitandrina amin'ny vanim-potoana maina kokoa. Miaraka amin'ny salan'isa Krismasy amin'ny taona 2020 andrasana hidina 7% raha oharina tamin'ny taon-dasa, amin'ny vola mitentina 1.5 tapitrisa tapitrisa pounds, dia mila mijery ny fampiakarana ny lalao ny fampielezan-kevitra doka mba hahatonga ny mpanjifa handany vola be.
Ny fialamboly dia foto-tsakafon'ny fiainana mihidy, miaraka amin'ny fahitalavitra, sarimihetsika, podcast ary lalao finday izay mandeha amin'ny làlana kely rehetra hanapahana ny elanelana misy eo amin'ny halaviran'ny fiaraha-monina sy ny fifandraisana virtoaly. Ny olana ho an'ny marika dia ny fihoaram-pefy amin'ny alàlan'ny endrika mahazatra: avelan'ny mpanjifa maniry zavatra hafa ary ny masony dia mijery dokambarotra miverimberina. Ity Taom-baovao ity no fotoana mety hampiakan'ny marika ny sofiny amin'ny tany, ary hananany fironana vaovao hialana amin'ireo mpifaninana.
Zava-dehibe ny lalao
Loharanom-baovao tsy voarara ho an'ny mpanao dokambarotra, ny lalao finday fotsiny dia niteraka 48% amin'ny vola miditra amin'ny lalao manerantany amin'ity taona ity, miaraka amin'ny 77 miliara dolara lehibe. Ny lalao finday dia miorim-paka tsara amin'ny fialamboly fanidiana, fa tsy ho an'ireo tanora tanora stereotypical ihany. Ny demografika lalao dia nivoatra nandritra ny taona maro, ary ny tsenan'izy ireo kendrena dia nivelatra tampoka kokoa.
Androany, 63% amin'ireo mpilalao finday no vehivavy manana salanisa gamer vehivavy, 36 taona.
MediaKix, Statistikan'ny Gamer vehivavy
Ny lalao finday dia manome fotoana lehibe hahatratrarana marika miaraka amin'ny fifantohana mazava kokoa amin'ny demografika kendrena. Ny sehatra dia afaka mampiasa mpihaino tsy voatanisa ary mampifandray marika amin'ireo mpanjifa mivantana. Raha tsorina, ny lalao finday dia afaka mampifandray marika amin'ny mpihaino maherin'ny 2.5 miliara mpilalao manerantany: ny tratran'ny marika mety lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny fialamboly iray manontolo. Mba hanararaotana ny varotra Taom-baovao malaza dia mila mihaino ny fitakian'ny mpanjifany sy ny tsena ny marika: mety tsy hampaninona raha mampifantoka ny sain'izy ireo amin'ny lalao finday ho fidiram-bola mety lehibe.
Audio - Ny sisintany vaovao
Ny doka audio dia tsy ny megaphone fampielezam-peo voafetra intsony hatramin'ny am-polony taona lasa izay. Izy ireo dia mety ho kanto, malama ary mamorona traikefa iray izay manome taratra ny fifandraisan'olombelona marina.
Miaraka amina mpandahateny marani-tsaina miaraka amina feo mandeha maharitra any amin'ny trano maro any Etazonia, dia be loatra ny dokam-barotra nomerika. Izy ireo koa dia raisina tsara kokoa:
Miaraka amin'ny 58% -n'ny mpanjifa mahita doka audio mpandaha-teny tsy dia manelingelina noho ny endrika hafa, raha 52% kosa nilaza fa mahasarika kokoa ihany koa!
Ny fahombiazan'ny doka audio dia tsy misy toa azy, miaraka amin'ny 53% ny mpanjifa rehefa avy nividy mifototra amin'ny doka am-peo.
Amin'ny lalao finday, ny doka am-peo dia azo alaina kely kokoa hahatsapa ho toy ny zava-misy: afaka tafiditra ao anaty rafitra famoronana izy ireo, manome ny marika vaovao sy mavitrika amin'ny dokam-barotra.
Azo atao mihitsy aza ny manangana ny lalao manodidina ny doka audio nakambana tanteraka, manampy ny traikefa iray manontolo ho an'ilay gamer: toy ny radio natsangana tao amin'ny Big Brother: The Game izay vao haingana, izay nampiasa ny endrika doka AudioMob hanolotra doka am-peo mandritra ny lalao.
Napetraka ny fampandrosoana DSP mahomby AudioMob eo an-tampon'ireo doka am-peo amin'ny lalao, lasa endrika ankafizin'ny mpamorona. Ny fivontosana voajanahary amin'ny hetsika mankany amin'ny dokam-barotra amin'ny lalao tsy manelingelina, dia mitarika eo aloha sy afovoany.
Ny doka am-peo dia ahafahan'ny mpilalao manohy milalao na dia iharan'ny dokambarotra aza izy ireo; tsy variana loatra handao ny lalao izy ireo fa mbola mirotsaka amin'ny marika ihany. Ho an'ny mpanjifa, fandresena izany satria afaka manohy lalao; ho an'ny marika, mbola mahazo vahana be sy lasibatra hatrany izy ireo; ary ny mpandrindra dia afaka miantoka ny asan'ny mpampiasa tsy misy fanelingelenana sy lalina.
Fandresena fandresena iray ary fotoana iray hiavaka amin'ny vahoaka amin'ny fotoana marika marobe miady amin'ny sehatra afovoany.
Henoy ny marika!
Mandeha amin'ny làlambe miakatra ny doka audio, miaraka amin'ny vinavina ny fitomboan'ny vola 84% manomboka amin'ny taona 2019 ka hatramin'ny 2025, ary AudioMob dia manolotra vahaolana madio sy kanto ho an'ireo marika hiditra amin'ny tsena. Miaraka amina fivarotana ara-batana maro mihidy ary miha-mamorona kokoa ny fampielezan-kevitra amin'ny Taom-baovao, ny kianja fiadiana ho an'ny marika dia tototry ny filàna ambony noho ny mpifaninana.
AudioMob mametaka fotoana roa lehibe ahafahan'ny marika manapaka ny tabataban'ny indostria: ny lalao finday dia tontolo miroborobo voajanahary ho an'ny fametrahana doka miaraka amina mpihaino marobe ary ny doka am-peo dia mitondra traikefa manintona sy tsy manelingelina ho an'ny mpilalao.
Ny dokam-barotra amin'ny audio dia mety hampisondrotra ny kilaometatra fampahafantarana taom-baovao mihoatra ny ambiny amin'ny taona 2020, ary AudioMob no mitondra ny indostria hamokatra doka am-peo tsara kokoa, manaitaitra kokoa ary handentika.
Tsidiho ny AudioMob Raha mila fanazavana fanampiny
Tags: doka audiodokam-barotra amin'ny feoaudio dspaudiomobdspdoka amin'ny lalaolalaodoka amin'ny lalao video